Ikamu Lokuqeqesha Abathengisi
Ngisho Nezinzuzo Zibuyela Ekamu Lokuqeqesha
NgoLwesine, Juni 24, 2010 NgoLwesine, ngo-Okthoba 4, 2012 UMat Nettleton
Kungani enza Ama-Colts uye eKamu Lokuqeqesha? Abazi yini ukuthi badlala kanjani Ibhola?
NgoJulayi 30 walo nyaka amaColts azoya eTeaching Camp, lokhu kuzokhombisa ukuqala kwesikhathi samaviki amane sokuzijwayeza okukhulu okwenzelwe ukuphoqa abadlali ukuthi bagxile kulokho okudingeka bakwenze ukwenza ngcono ikhono labo lokudlala ibhola. Kepha kubukeka njengokuchitha isikhathi kimi, ngemuva kokuthi iningi lalaba badlali lichithe okungenani iminyaka eyisishiyagalombili edlule yempilo yabo besebenzisa ubuciko babo emidlalweni yokuncintisana kakhulu futhi amaColts anqobile ngaphezu kwanoma yiliphi elinye iqembu lochwepheshe ngalesi sikhathi. Yini Emhlabeni laba bantu abangacabanga ukuthi bazoyifunda?
Akumangalisi ukuthi ngosuku lokuqala lekhempu cishe bazokuzwa isicashuni esidumile iVince Lombardi ukuthi cishe bonke abaqeqeshi basebenzisa ukuqala ikhempu yokuziqeqesha. "Madoda, leli yibhola." Lokhu kuqala kukhombisa kubo bonke abadlali enkundleni ukuthi impumelelo ebholeni, kufana nempumelelo ekuthengiseni, imayelana nokugxila okuphelele futhi okukodwa ekwenzeni izinto ezincane ngokulungile futhi uqiniseke ukuthi usebenzisa ama-Fundamentals.
Njengoba sisebenza namakhasimende ethu akukho okugculisayo njengokubuka amehlo abo ekhanya njengoba bebona ukuthi ukuqeqeshwa kwezentengiso akuhlukile kunokuqeqeshwa kwezemidlalo. Bayabona ukuthi uhlelo asebeqalile ukulufunda alunalutho ngaphandle kochungechunge olulula lwe-Behaviours, Attitudes and Techniques – okuthi uma lwenziwe kahle lwengeze amathuba abo okuvala amabhizinisi amaningi nokwenza imali eningi.
Futhi bayabona ukuthi kungani ukuqeqeshwa inqubo eqhubekayo, neklayenti lethu elijwayelekile elisebenza nathi iminyaka engu-4-6. Ngoba noma ngabe kulula kangakanani Ukuziphatha, Isimo Sengqondo namasu kukhona umgwaqo omude osuka ekwazini okufanele ukwenze ukwenza okufanele ukwenze ngokuzenzakalela.
Angikholwa ukuthi ukwenza lokho kwenza okuphelele, empeleni ebholeni nasezithengisweni akukho okuphelele. Kodwa-ke, kuyo yonke imikhakha yobungcweti siyazi ukuthi ukwenza kuyathuthuka. Uma ubheka amandla akho okuthengisa, ingabe ayazijwayeza? Futhi ngokuzijwayeza ngiqonde ukuthi, ingabe basebenza ngempela ukuthuthukisa ngokuhlelekile amandla abo okuthengisa besebenzisa ukuqinisa okuqhubekayo okuhambisana nokuphindaphinda nokukalwa kwemiphumela? Noma sebephumile ukubona abantu abaningi ngangokunokwenzeka, benethemba lokuthi abakwenzayo kulungile?
Ngokuzayo lapho ubuka uPeyton Manning ephonsa iphasishi elibukeka lilula elibukeka lilula qiniseka ukuthi uyama kancane futhi uyazi ukuthi kumzuzu ngamunye uPeyton adlala ngawo enkundleni ngesikhathi semidlalo uchitha ngaphezu kwemizuzu engu-15 enkundleni eziqeqesha. Okungibuyisela embuzweni wami, uma ubheka amandla akho okuthengisa, ingabe bayazijwayeza?
Ongakufunda nge-Twitter kusuka kumaTweets
I-ATTN: Abathuthukisi Bezicelo Zokuxhumana Komphakathi